တရုတ် JAW CRUSHER PLATE-JAW LINER ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ | Shanvim
မေးရိုးပြားများ သို့မဟုတ် မေးရိုးပြတ်များသည် မေးရိုးကြိတ်စက်၏ မကြာခဏ အစားထိုးဝတ်ဆင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောကြောင့် မေးရိုးကြိတ်ခြင်း၏ အရည်အသွေးသည် ကြိတ်ချေမှုထိရောက်မှုနှင့် လည်ပတ်ချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အရေးကြီးဆုံးအချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
မေးရိုးပြား အစုံသည် ရွေ့လျားနိုင်သော မေးရိုး (swing jaw) နှင့် ပုံသေ မေးရိုးပြား (stationary jaw) တို့ ပါဝင်သည်။ မေးရိုးကြိတ်စက်တွင် ကြိတ်ချေထားသော ပစ္စည်း၏ ဖိသိပ်မှုကို ရရှိနိုင်သည်။ ကျောက်တုံးသည် မေးရိုးအောက်ခြေသို့ ဖြတ်သွားလောက်အောင် သေးငယ်သည့်တိုင်အောင် ကြိတ်စက်၏ မေးရိုးထဲတွင် ကျန်နေပါသည်။
Jaw ဟင်းပွဲ သို့မဟုတ် မေးရိုးသေတယ်။ အများစုသည် မကြာခဏ အစားထိုးကြသည်။ မေးရိုးကြိတ်စက်၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ဝတ်ဆင်ပါ။ဒါကြောင့် အရည်အသွေး ၊ မေးရိုးသေ ကြိတ်ခွဲခြင်း၏ ထိရောက်မှုနှင့် လည်ပတ်ချိန်ကို ဆုံးဖြတ်သည့် အရေးကြီးဆုံးအချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
အစုံပါပဲ။ မေးရိုးပြား တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော (swing jaw) နှင့် ပုံသေမေးရိုးပြား (စာရေးမေးရိုး)။ မေးရိုးကြိတ်စက်တွင် ကြိတ်ချေထားသော အရာများကို ဖိသွင်းသောအခါ အောင်မြင်သည်။ ရွေ့လျားနိုင်သော မေးရိုးသေခြင်း။ feed ကိုဆန့်ကျင်သည်။ fixed မေးရိုးသေဆုံး. ကျောက်တုံးသည် မေးရိုးအောက်ခြေသို့ ဖြတ်သွားလောက်အောင် သေးငယ်သည့်တိုင်အောင် ကြိတ်စက်၏ မေးရိုးထဲတွင် ကျန်နေပါသည်။
စစ်မှန်သောအစားထိုးအပိုအပိုပစ္စည်း - SHANVIM® မှပြုလုပ်သော မေးရိုးပြားများ
SHANVIM® သည် ထုတ်လုပ်၊ သိုလှောင်မှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုများ "စစ်မှန်သောအခြားရွေးချယ်စရာ" Metso®၊ Sandvik®၊ Extec®၊ Telsmith®၊ Terex®၊ Powerscreen®၊ Kleemann®၊ Komatso®၊ Kemco®၊ Finlay® နှင့် Fintec® အပါအဝင် အပြည့်အဝကျယ်ပြန့်သော OEM မေးရိုးကြိတ်စက်များ၏ မေးရိုးပြားများ။
အသိပေးစာ: အောက်ပါဇယားတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်နိုင်သော OEM အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သော မေးရိုးပြားများ မပါဝင်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် အခြားအမှတ်တံဆိပ်များမှ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို လိုအပ်ပါက သို့မဟုတ် သင်အစားထိုးရန်ရှာဖွေနေသော မေးရိုးပြား၏ OEM အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကို သိပါက သို့မဟုတ် သင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် မေးရိုးပြားပုံဆွဲခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အီးမေးလ်ဖြင့် သို့မဟုတ် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
ငုတ်တုတ်နှင့် ရွေ့လျားနိုင်သော မေးရိုးအသေ နှစ်ခုစလုံးသည် ပြားချပ်ချပ်ချပ် သို့မဟုတ် ဖော့စွတ်နေနိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် မေးရိုးပြားများကို ဝတ်ဆင်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် မြင့်မားသောမန်းဂနိစ်စတီးလ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ မြင့်မားသောမန်းဂနိစ်သံမဏိဟုလည်းလူသိများသည်။ Hadfield မန်းဂနိစ်သံမဏိမန်းဂနိစ်ပါဝင်မှု အလွန်မြင့်မားပြီး ပိုင်ဆိုင်သည့် သံမဏိတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ austenitic ဂုဏ်သတ္တိများ. ထိုသို့သောပန်းကန်ပြားများသည် အလွန်မာကျောရုံသာမကဘဲ ပျော့ပျောင်းပြီး အသုံးပြုရခက်ခဲသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရိုမီယမ် 2% မှ 3% အထိရှိသော မန်းဂနိစ် 13% နှင့် 22% အဆင့်များတွင် မေးရိုးပြားများကို ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မြင့်မားသော မန်းဂနိစ် မေးရိုးသေဆုံးခြင်း ဂုဏ်သတ္တိများကို အောက်ပါဇယားကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
ယခင်- သံတူရာ-သတ္တုခြစ်ရာ အပိုပစ္စည်း
နောက်တစ်ခု: CHOCKY ဘား-အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
မေးရိုးပြားကို ပြင်ဆင်ပြီး ရွှေ့ပါ။
မေးရိုး Crusher Pitman
မေးရိုး Crusher အပိုပစ္စည်းများ
မေးရိုး Crusher ဝတ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများ
Jaw Crusher အတွက် အစိတ်အပိုင်းများ
Sandvik သည် မေးရိုးပြားကို ပြုပြင်ထားသည်။
Plate Jaw Crusher ကိုပြောင်းပါ။